Ataovy fitsapan-kevi-bahoaka! • AoRaha
Mbola ny Teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana ihany aloha no resaka eto. Tsy fantatra intsony izay tena marina amin’izy ity! Misy ireo mpanadrohadro, misy ireo mankasitraka, misy te hiverina amin’ny teo aloha, misy indray ireo te hitsapa ny halalin’ny rano. Tsy kilalaon-jaza anie ity raharaha ity e. Iankinan’ny ho avin’ny firenena io ary mety hampivoatra na koa vao mainka hanabado ny fomba fisainan’ny ankizy, raha tsy mitandrina.
Raha tsy tiana hivaralila ny lafiny fanabeazana eto Madagasikara dia havereno an-databatra boribory ny fifampidihana. Tsy maninona ataovy fitsapan-kevi-bahoaka mihitsy raha izay no ahitana ny marimaritra iraisana. Aoka tsy ny tombontsoan’ny sekoly tsy miankina ihany, na ny tombontsoan’ny minisitera fotsiny no jerena fa ny ho avin’ny zaza malagasy tsy ankanavaka, hatrany amin’ireo tany lavitra andriana. Fanabeazana ho an’ny rehetra mantsy no tanjona.
Diniho anie ny zava-misy any ankodahoda any e: ny sekoly ianarana tsy misy rindrina; dia an-tongotra an-kilaometatra maro isan’andro no tsy maintsy ataon’ny mpianatra vao afaka mahay mamaky teny sy manoratra; miampita rano sy havoana ary lohasaha; ny ray aman-dreny fadiranovana, ny sakafo tsizaizary, ny mpampianatra tsy ampy tosika…Aiza no tsy hitsoaka ny sekoly ireo zanak’ambanivolo? Dia ho fadiranovana mandrakizay izany ry zareo ireo raha tsy mapetraka Teti-pivoarana matipaika ny minisitera. Dia ahoana ny zony? Samia maka saina aloha, dia alaviro ny fitiavan-tena fa tsy raharahan’olom-bitsy eto Analamanga fotsiny ity fanabeazana ity mahakasika an’i Madagasikara manontolo mihitsy.